एक आप्रवासी वकिल को आवश्यकता छ? सम्पर्क Law & More BV
अध्यागमन कानूनले प्रवेश, निवास र विदेशीको निर्वासन सम्बन्धित मामिलाहरू नियन्त्रित गर्दछ। विदेशी नागरिकहरू डच नागरिकहरू नभएका मानिसहरू हुन्। यी व्यक्तिहरू शरणार्थी हुनसक्छन्, तर उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू जो पहिले नै नेदरल्याण्ड्समा बस्छन्। तिनीहरू नेदरल्याण्डमा आउन र काम गर्न चाहने मानिसहरू पनि हुन सक्छन्।
इमिग्रेशन कानूनको आवश्यकता छ?
> निवास अनुमतिको लागि आवेदन
> डच राष्ट्रियताको लागि आवेदन
> परिवार पुनर्मिलन
> श्रम प्रवासन
> अत्यधिक कुशल आप्रवासी
हाम्रो अध्यागमन वकीलहरू तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी छन् यदि तपाईं आफैंको लागि निवास अनुमति वा प्राकृतिकरण आवेदन पेश गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको साथी, एक परिवारको सदस्य वा कर्मचारी। Law & More तपाईंलाई सल्लाह दिन वा तपाईंको लागि सम्पूर्ण निवास अनुमति आवेदन लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको आवेदन अस्वीकार गरिएको छ भने, हामी तपाईंलाई डच अध्यागमन र प्राकृतिक सेवा (IND) को निर्णयको लागि एक आपत्ति सबमिट गर्न पनि मद्दत गर्न सक्दछौं। के तपाईंसँग हाम्रो अध्यागमन वकीलहरूको लागि प्रश्न छ? यदि हो भने, हामी पक्कै पनि तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं।
विषयहरूको उदाहरण जुन हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं:
Idence निवास अनुमति;
• परिवार पुनर्मिलन;
• श्रमिक प्रवासन;
Ly अत्यधिक कुशल आप्रवासीहरू।
हाम्रो अध्यागमन वकीलहरू तपाईंको लागि तयार छन्
निवास अनुमतिको लागि आवेदन
के तपाई नेदरल्याण्डमा बस्न चाहानुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं
के तपाई आफ्नो परिवार संग हुनुहुन्न वा तपाईको परिवार तपाई संग छैन? पत्ता लगाउनुहोस् कि हामी तपाईंको लागि के गर्न सक्दछौं
के तपाइँ काम गरी नेदरल्याण्डमा बस्न चाहानुहुन्छ? हामी सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया मिलाउन सक्छौं
अत्यधिक कुशल आप्रवासी
के तपाइँ एक नेदरल्याण्डमा एक वैदेशिक कर्मचारी कानूनी रूपमा काम गर्न चाहानुहुन्छ? सम्पर्कमा रहनुहोस्
कार्य को थियो
नियमित निवास अनुमतिले शरण निवास अनुमति बाहेक सबै निवास अनुमतिहरू समावेश गर्दछ। IND ले एक प्रतिबन्धित प्रवेश नीति लागू गर्दछ। एक निवास अनुमति को लागी एक आवेदन IND द्वारा साधारणतया अस्वीकार गरीन्छ यदि सर्तहरू पाएको छैन भने। हाम्रो अध्यागमन वकिलहरूसँग विभिन्न प्रकारका निवास अनुमतिहरूका लागि आवेदन दिनको अनुभव छ। हामी निम्न निवास अनुमतिका लागि आवेदन सबमिट गर्न सक्छौं:
Family परिवार पुनर्मिलनको लागि निवास अनुमति;
• स्वरोजगार निवास अनुमति;
Idence निवास अनुमति ईयू नागरिक;
Skilled अत्यधिक कुशल आप्रवासीको लागि निवास अनुमति;
Idence निवास अनुमति अध्ययन / खोजी वर्ष;
Idence निवास अनुमति अनिश्चित अवधि;
Continued निरन्तर निवासको लागि निवास अनुमति;
Temporary अस्थायी रहन को प्राधिकरण (MVV)।
डच राष्ट्रियताको लागि आवेदन
यदि तपाईं डच राष्ट्रियताका लागि आवेदन दिन चाहानुहुन्छ भने प्राकृतिकरणको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। तपाईं प्राकृतिकरणको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि हुन्न भनेर आफैलाई जाँच्न प्राय: गाह्रो हुन्छ। राम्रो अध्यागमन वकिलको सहयोग महत्वपूर्ण छ, किनकि शर्तहरू प्राय: धेरै जटिल हुन्छन्। एक सफल अनुप्रयोग को लागी Naturalization अनुप्रयोग प्रक्रिया मा सावधानी आवश्यक छ। के तपाईंलाई डच राष्ट्रियताका लागि आवेदन दिन सहयोग चाहिन्छ? Law & More तपाइँलाई सही मद्दत प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाको बखत समर्थन गर्दछ। .
सख्त सर्तहरू पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि पनि लागू हुन्छ। यदि एक शर्त पूरा गरीएको छैन भने, आवेदन अस्वीकृत हुनेछ। निम्न परिवारका सदस्यहरू पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि योग्य छन्।
Registered एक दर्ता साझेदार;
Un एक अविवाहित पार्टनर;
• नाबालिग बच्चाहरू।
परिवार पुनर्मिलनको लागि एक सर्त यो छ कि आवेदक र परिवारको सदस्य दुबै कम्तिमा २१ वर्षको हुनुपर्दछ। जीवनसाथी, पंजीकृत साझेदारहरू, अविवाहित साझेदारहरू र नाबालिग बच्चाहरू बाहेक, समलि sex्गी (अविवाहित) पार्टनरहरू पनि पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि योग्य हुन सक्छन्।
के तपाईं नेदरल्याण्ड्स यहाँ आएर अत्यधिक कुशल आप्रवासी, स्वरोजगार गरेको व्यक्तिको रूपमा काम गर्न वा व्यापार भिसाको साथ छोटो अवधिको लागि यहाँ आउन चाहानुहुन्छ? हाम्रो अध्यागमन वकिलहरूले दुबै कर्मचारी र रोजगारदाताहरूलाई सम्भावनाहरूको बारेमा सल्लाह दिन्छन् र उनीहरूलाई आवेदन प्रक्रियाको माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्दछन्।
नेदरल्याण्ड्समा वैदेशिक कर्मचारीलाई बसोबास गर्न र कानूनी रूपमा काम गर्न अनुमति दिन एउटा उत्तम तरिका भनेको एक उच्च कुशल आप्रवासीको रूपमा निवास अनुमतिको लागि आवेदन गर्नु हो। त्यो अवस्थामा, कार्य अनुमति आवश्यक छैन। सर्त तथापि, रोजगारदाता नेदरल्याण्ड्समा IND का साथ स्वीकृत प्रायोजकको रूपमा दर्ता गरिएको छ। थप रूपमा, यो महत्वपूर्ण छ कि अत्यधिक कुशल आप्रवासीले निश्चित आय आवश्यकता पूरा गर्दछ। हाम्रो अध्यागमन वकीलहरूको टीमले तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्छ र हामी तपाईंको तर्फबाट IND मा निवेदन पेश गर्न सक्छौं। के तपाई यो चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More.